आर्किड हेरविचार - यी सुझावहरूको साथ तपाईको आर्किड आउँनेछ
आर्किड हेरविचार - उनीहरूको आर्किड कसरी वृद्धि गर्ने | प्लांट हाउस
कसरी आर्किडको विकास बढाउन सकिन्छ?
Orchids हेरविचारमा सबैभन्दा साधारण गल्ती
आर्किड्स वा आर्किडिसेaeलाई धेरै लोकप्रिय भनिन्छ र संसारको बिरुवामा फैलिएको छ।
उचित orchids हेरविचार
Orchids डेisy परिवार को पछि, जो तथाकथित Asteraceae, Bedecktsamigen पौधों को रेंज मा सबै भन्दा ठूलो समूह।
तिनीहरूलाई विशेष गरी सुन्दर मानिन्छ। यस कारणको लागि, आर्किड धेरै फूल प्रेमीहरूको लागि बिरुवाहरू बीच रानी हो।
आर्किडको जैव विविधता ठूलो छ। कुल त्यहाँ 30.000 अनुमोदित प्रजातिहरू छन्। निम्न पाठले हेरविचार र सुन्तलाका राम्रो प्रबन्धका लागि केही सुझावहरू र चालहरू वर्णन गर्दछ। यो पनि गल्ती गर्दछ कि गल्तीको हेरविचार प्रायः चर्चा गर्दछ।
मूलतया, आर्किड पौडेल प्रयोग गर्नु निकै सजिलो छ जुन धेरै मागिएको छैन।
यद्यपि, आर्किड हेरविचारमा केही गल्तीहरू छन्। त्यसोभए यो भएन र आर्किडहरू राम्रो महसुस गर्छन्, निम्न पाठले यसलाई कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिन्छ।
आर्किडको विकासले सही ढाँचाको अवस्थालाई अनुकूलित गर्न सकिन्छ। यसमा आर्किडका लागि उपयुक्त संयंत्र बर्तनको खरीद पनि समावेश गर्दछ। यहाँ, बर्तनको आकार महत्वपूर्ण छ। कृपया पक्का गर्नुहोस् कि तपाईको आर्किडको लागि पोष्ट उपयुक्त आकारको हो जुन रोपणको लागि उपयुक्त छ।
यसको अर्थ कि आर्किड बर्तन धेरै ठूलो हुनु हुँदैन। यसको लागि पृष्ठभूमि यो आर्किडको बिरुवा बत्ती स्थिरता दिन्छ। यद्यपि, धेरै ठूला पोष्टमा यो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। सबैभन्दा खराब अवस्थामा, ठूलो बर्तनको कारण आर्किड ठीकसँग समर्थित छैन। तथापि, यो आवश्यक छ कि फूल राम्रो बढ्न सक्छ। यस अवस्थामा, अधिक स्थानको अर्थ बढ्दो हुँदैन, तर विपरीत। यदि तपाईं एक बर्तन धेरै ठूलो खरीद गर्नुहुन्छ भने यो रोपण गर्दछ।
अक्सर, यो गल्ती यो तथ्य यो हो कि बिरुवा अझै अझै बढ्दै छ र उचित छ र यो पहिले देखि नै सुरुमा प्रदान गरिएको छ। तथापि, यसले तपाईंको बिरुवा विकासको लागि एक महत्वपूर्ण ढाँचा दिन्छ। एक आर्किड जुन आफ्नो बत्तीमा कुनै स्थिरता हुँदैन, राम्रो हुँदैन। त्यसकारण, कृपया सानो बर्तनको लागि पुग्नुहोस्। त्यसपछि मात्र आर्किडको जडले राम्रो ढंगले लंगर गर्ने मौका छ।
साथै, साना बर्तनहरू पानीको खण्डमा उपयुक्त छन्। यस बिंदुमा, यो ध्यान दिइन्छ कि आर्किडले पानीको ठूलो मात्रामा मनपर्दैन। यो एक सानो बर्तनको लागि उपयुक्त छ जसमा तपाईंले आफ्नो आर्किड रोप्नुहुन्छ र तपाई नियमित रूपमा पानीको अपेक्षाकृत सानो मात्रामा पानीको साथ पानी लिनुहुन्छ। त्यसोभए तपाईंले आफैंलाई ठूलो बर्तन संग सम्बन्धित समस्याहरू सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ।
उदाहरणका लागि, यी समस्याहरूमध्ये एउटा यो हो कि पानीको मात्रा उच्च हुँदा, आर्किडले पूर्णतया पानीलाई अवशोषित गर्न सक्दैन। त्यसपछि पानी प्वालमा राख्छ। फलस्वरूप, रोपण जड अनिवार्य रूपमा स्थायी रूपमा गीला हुन्छ। यदि यो अवस्थामा समय मा पत्ता लागेन भने, रोपण बीउ हुन्छ। यसले यो तथ्यलाई प्रकट गर्छ कि जड घुमाउँछ। यो अवस्था आर्किडको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यस समयमा, तिनले अब आफूलाई आवश्यक पोषक तत्वहरू प्रदान गर्न सक्दैनन्। यदि यो अवस्था पहिचान भएन भने, रोपण मर्न सक्छ। यो सबै लागतमा जोगिनै पर्छ। कृपया सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि बर्तनमा पानी छैन।
रोपण - धेरै पानी छ
कुनै अन्य रोपनी जस्तै, आर्किडहरू पानीमा बाँच्न आवश्यक छ। यद्यपि, किनकि आर्किड्सले पातहरू छन् जुन उनीहरूको विशेष गुणहरूको कारण धेरै पानी प्रदान गर्न सक्दैनन्, दायाँ खुट्टा आवश्यक छ।
म कसरी आफ्नो आर्किडहरू फूलमा हेरचाह गर्दछु?
जड पुरा तरिकाले पुनर्स्थापित भएपछि, बाँकी पानी हटाइनु पर्छ। अन्यथा, रोपण मृत्युसँग धम्की दिइन्छ। यसैले, रोपण को खपत को जोखिम सूखे को खपत को जोखिम भन्दा धेरै अधिक छ। यसको विशेषताहरूको कारण, आर्किड लामो समयसम्म पानीको बिना राम्ररी बाँच्न सक्दछ। यसैले दायाँ कास्टिंग भनेको आर्किड हेरविचारको अल्फा र ओमेगा हो।
2) आर्किड एक सूरज होइन - धेरै सजिलो सूर्य
धेरै अन्य बिरुवाहरू जस्तै, आर्किडले सूर्यलाई मनपर्छ, तर केवल मध्यस्थतामा। गन्धमा धेरै लामो हुर्केका सुन्तलाहरू, अँध्यारो स्पटहरू प्राप्त गरेर यसलाई संवेदनशील। यो राम्रो देखिँदैन र रोपण असुविधाजनक लाग्छ। यस अवस्थामा तपाईँले फूलको लागि नयाँ, छायाधीश स्थान खोज्नु पर्दछ। धेरै प्रकाशले आर्किडलाई मद्दत गर्दछ, तर प्रत्यक्ष सिडलाइट।
3) खराब हवा - जाडोमा ताप तापनि
कोठामा हावा धेरै सुत्न हुँदैन, किनकि यो पनि आर्किड मनपर्दैन। उनीहरूको सट्टामा न्यानो र हावा हावाको मन पर्छ। नमीको उत्पादन गर्न, उदाहरणको लागि, रोपण पानीको साथ स्प्रेड गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यो केवल छोटो अवधि हो। एक रेडिएटर माथि राखेर एक सर्दमा बिरुवालाई गर्मी दिन चाहन्छ। तर यो हावा हावा सुर्खेतलाई हानिन्छ, किनकि यसले धेरै आवश्यक आर्द्रता कम गर्दछ।
4) काटन गर्दा काटन - एरिडहरूको लागि हवाई जडहरू महत्त्वपूर्ण छन्
अर्को हेरविचार सन्दर्भ चिन्ताबाट जगेडा जराहरू चिन्ता गर्छन्। यो हेर्न को लागी सुन्दर छैन। तथापि, आकाशीय जड आर्किडको लागि महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरू पौधेको केन्द्र हुन् र यसैले पोषक तत्वको आपूर्तिको लागि जिम्मेवार छन्। त्यहाँ एक अपवाद छ: यदि जड सडाई वा मरेका हुन्छन् भने तिनीहरू अवश्य हटाउन सकिन्छ।
5) दायाँ उर्वरक खुराक
आर्किडसँग अपेक्षाकृत कम पोषक तत्वको आवश्यकता छ। बिरुवाको वनस्पति चरण अप्रिल देखि सेप्टेम्बर सम्म हो। केवल यस समयमा रोपण महिनामा दुई पटक अधिकतम रूपमा उर्वर्याइनुपर्छ। त्यस उर्वरने पछि अब आवश्यक छैन र त्यसैले छोडिनु पर्छ।
6) तापमान धेरै परिवर्तन नगर्नुहोस्
आर्किड आदतलाई प्रेम गर्दछ। यो तापमानको उचाइमा पनि लागू हुन्छ। यदि आर्किड लाइभमा कोठामा तापमान परिवर्तन हुन्छ, यसले अब राम्रो महसुस गर्छ र फूललाई ​​रोक्छ। यो रोक्नको लागि, हेरचाह गर्नुपर्छ कि कोठाको तापमान लगभग वर्ष भर एकै छ।
वयस्कों को लागि पृष्ठ आर्किड रंग